Fap or Fuck - ရွေးချယ်ရမယ့်အချိန် (Vary အင်တာဗျူးများ Gary) - သင်၏ ဦး နှောက် On Porn
သိပ်မကြာသေးမီကကမ္ဘာ့စိတ်အားထက်သန်သောလူငယ်လူငယ်များသည်ကမ္ဘာကြီးကိုဂရုစိုက်စရာမလိုဘဲပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသောအခြေအနေသို့ပျော်ရွှင်စွာဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့သည်မှာသိပ်မကြာလှပါ။ သို့သော်ယခုအချိန်အတန်ကြာအထိသူတို့၏ ဦး နှောက်မှသွေးမလွှဲရသေးသောမည်သူမဆိုအတွက်သိသာထင်ရှားသည့်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုသတိထားမှုများတိုးများလာနေသည်။
သငျသညျစာရိတ္တပျက်ပြားမှု၏န့်အသတ်ဗီဒီယိုအမျိုးအစားဗီဒီယိုများတန်ချိန်စောင့်ကြည့်လျှင်အမည်ရ, သင်တစ်ဦးလူနေမှု, အသက်ရှူ, သင်တို့နှင့်အတူ IRL လိင်ပစ္စည်းပစ္စယလုပ်ဖို့လိုလားတဲ့သူအဝတ်အချည်းစည်းလူ့ဖြစ်လျက်ရှိနေဖြင့်ဖွင့်ဖို့က ပို. ခက်ခဲရှာတွေ့သွားနေ။ တစ်စုံတစ်ဦးကတစ်စုံတစ်ဦးရဲ့ arsehole သို့သူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ခြေချောင်းကပ်စောင့်ကြည့်ဥပမာသင်ကပုံမှန်ခံစားရလျှင်သင်ငြီးငွေ့စရာမျိုးထွက်အောင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ဒီပွိုင့်ပြုစုပျိုးထောင်ဘို့ဘဏ်စာရင်းထဲသွင်းနိုင်ပါသည်သူကလူတစျခုမှာဂယ်ရီ Wilson ကဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအ site ကို, yourbrainonporn.com, porn သည်၎င်း၏အသုံးပြုသူများကိုဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရန်ကြိုးပမ်းမှု၏ရှေ့တန်းမှပါ။ အခုတော့သူဟာဗဟုသုတအားလုံးကိုစာအုပ်တစ်အုပ်အဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပြီ။ Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်: အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်စွဲမှု၏ & Emerging သိပ္ပံ.
ငါသည်သူ၏သစ်ကိုစာအုပ်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းငယ်ရွယ်သြနန်နိူးသန်းပေါင်းများစွာ facing porn စွဲ၏ကိစ္စကိုဆွေးနွေးရန်ဂယ်ရီတောင်းဆိုခဲ့သည်။
Vice - ဒီတော့မင်းရဲ့စာအုပ်ရဲ့အဓိကအချက်ကမင်းကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ရှုနိုင်သလိုလိင်ဆက်ဆံနိုင်တယ်၊
ဂယ်ရီ Wilson က: ဒါဟာနှစ်ခုလုံးရှိသည်ဖို့သင်တန်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်အချို့သောယောက်ျားများအတွက်မူ၎င်းနှစ်ခုစလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ရန်ခက်ခဲသည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုဖြင့်ယောက်ျားအချို့သည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) သာမကအခြားလိင်အင်္ဂါလက္ခဏာများဖြစ်သောအော်ဂဇင်ကိုမစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်း၊ သုတ်ရည်လွှတ်မှုနှောင့်နှေးခြင်း၊ စစ်မှန်သောမိတ်ဖက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုလျော့ကျစေခြင်း၊ အနည်းဆုံး porn မှာအရသာရှိတာကသူတို့အတွက်ထူးဆန်းပြီးစိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလိုက်တာပါပဲ။
မရလွန်း - - အချို့ကိုသင် porn စောင့်ကြည့်နိုင်ပြီးနေဆဲကျန်းမာလိင်အသက်ကို? လုံခြုံအဆင့်ရှိပါသလား?
porn အကဲခတ်သင့်ကိုအစဉ်ကိုထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လောက်ကိုသင်အကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ်ဟုပြောဖို့ခက်ခဲသည်။ ဒီတော့တစ်နည်းငါတို့သည်ဆိုးဆိုးရွားရွားစွဲနေသောယောက်ျားတွေမြင်ကြပြီ, ထိုသို့နက်ရှိုင်းစွာသူတို့ရဲ့လိင်ဘဝတွေကိုထိခိုက်ခဲ့သည်။ သူတို့ကတကယ့်ဖက်နဲ့အစစ်အမှန်စိုက်ထူရနိုင်ရန်အတွက် porn ကိုချွတ်တစ်နှစ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးအစွန်းရောက်ဖြစ်ပျက်မှုပါပဲ။ ယင်းရောင်စဉ်၏အခြားအဆုံးတွင်သို့သော်သင်ကရည်းစားနှင့်အတူအချို့သောယောက်ျားတွေရပါလိမ့်မယ်သူတို့ကြိမ်၏စုံတွဲတစ်တွဲတစ်ပါတ် porn ကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီမှာစာချုပ်ပါပဲ။ သင် variable တွေကိုဖယ်ရှားပစ်သည်အထိသင်သာသက်ရောက်သည်မည်မျှမသိရပါဘူး။ ဒီတော့ဒီယောက်ျားတွေရုံစိန်ခေါ်မှုပြုပါနှင့် "OK ကိုငါ porn ကိုကြည့်ရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်" ဟုဆိုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကိုသူတို့ရှာတွေ့ကြသေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်လိမ့်မယ်။ ထိုသူတို့ကအရင့်အကြိုးကြေးဇူးကိုမှန်ကန်လိင် ပို. မထွက်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့၏ဇနီးသို့မဟုတ်ရည်းစားတွေအများကြီးပိုကောင်းလှပါတယ်။ သူတို့ဟာညစ်ညမ်းသူတို့ကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်သည်ဟုမထင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရဆေးလိပ်ဖြတ်တစ်ကြိမ်။ အမှန်ကတော့ porn သက်ရောက်မှုတစ်ခုကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်ရှိပါတယ်။
porn ကွဲပြားပုံစံများအတွက်သားစဉ်မြေးဆက်အဘို့အလှည့်ပတ်ခဲ့သည်။ အဘယ်အရာကိုထိုကဲ့သို့သော ED အဖြစ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်ဒီမြင့်တက်စေခဲ့ပါတယ်? ဒါဟာရိုးရှင်းစွာပိုမိုမြန်ဆန်ခြင်းနှင့်ပိုမြန်အင်တာနက်အမြန်နှုန်းတစ်ဦးအမှုရှိပါသလား?
ဒါဟာကျိန်းသေအတိတ်နှစ်အနည်းငယ်ဆိုးရွားလာခဲ့သည်ရဲ့။ ပထမဦးစွာအင်တာနက်များ၏ပို့ဆောင်မှုစနစ်ကဒီတင်းမာမှုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ဒုတိယအသို့သော်ရလဒ်အဖြစ်ဆယ်ကျော်သက်အဖြစ်မကြာမီသူတို့ကအလိုရှိကြသည်တွင်အဖြစ်ခက်ခဲ-Core streaming များဗီဒီယိုများပြည့်စုံလက်လှမ်းရှိသည်။ အင်တာနက်ဒါနှစ်သက်ဖွယ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုမေးရန်ရှိသည်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလဲ? Facebook ကိုစဉ်းစားပါ။ Facebook ကိုစွဲလမ်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုပြသကြောင်းလေ့လာမှုများရှိပါသည်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးစွဲထဲမှာပေါ်ပေါက်သောဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို mirror ကြောင့်ဦးနှောက်ကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ တကယ်တော့ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း 70 အင်တာနက်-ဦးနှောက်လေ့လာမှုများရှိပါသည်။ အဘယ်အင်တာနက်နှင့်အတူဖြစ်ပွားနိုင်သည်ကြောင့် arousal နဲ့ dopamine အဆင့်ဆင့်တိုးပွါးလာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Dopamine အင်အားကြီးဒီဆုလာဘ်တိုက်နယ်နဲ့အင်တာနက်ကဒီသဘောနဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ပုံအသစ်များကိုနှိပ်ခြင်း၊ စကားလုံးအသစ်များ၊ မက်ဆေ့ခ်ျများပို့ခြင်းနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများလက်ခံခြင်းတို့သည်အသစ်သောအရာဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အံ့အားသင့်စရာ၊ သင်သည်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၊ အမြင့်ဆုံးရရှိနိုင်သောသဘာဝနှိုးဆွမှုနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး hard-core ဗွီဒီယိုများနှင့်အတူ Tube site မှတဆင့်ဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး ၏ရှေ့မှောက်၌ထားပါကဆယ်ကျော်သက်များသည်ဤကဲ့သို့သောနှိုးဆွခြင်းနှင့် dopamine အဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ လိင်မှုကိစ္စမှလွတ်မြောက်ရန်သင့် ဦး နှောက်ကိုလေ့ကျင့်ပေးနိုင်သည်။ “ အစစ်အမှန်” လိင်ဟုခေါ်သောစစ်မှန်သောလူများ၏ဤဗီဒီယိုများကိုသင်ကြည့်သောအခါစိတ်ကူးကိုလုံးဝအစားထိုးသည်။ အဲဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာမင်းစဉ်းစားလို့မရတော့ဘူး။ သင်ဖန်တီးနိုင်သောလုပ်ဆောင်မှုကိုစိတ်ကူးယဉ်နေသည့်ရုပ်ပုံများဖြင့်မဟုတ်ဘဲဤလုပ်ဆောင်မှုအားလုံးကိုကြည့်ရှုသည့်ခရီးသွားတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။
စာအုပ်၌သငျမဂ္ဂဇင်းများနှင့်အတူကြီးပြင်းလာသောသူတို့အားဆင့်ဆိုရမည်ထက် ပို. porn နှင့်ထိတွေ့ခံရပုံမှန်အားဖြင့်အငယ်ကလူစအရာအငယ်နှင့်အထက်သားစဉ်မြေးဆက်အကြားဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ဆွေးနွေးပါ။ ဒီရိုးရှင်းစွာအထွေထွေစည်းမျဉ်းသို့မဟုတ်အချို့သော crossover ရှိသလော
သငျသညျလေ့လာမှုများကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါသင်ကလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအမြင်အရ။ 14-25 အသက်ပြည်သူ့လူကြီးများထက် porn တစ်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားအသုံးပြုမှုရှိသည်နှင့်အသက်တက်အဖြစ်သင်တန်း၏အသုံးပြုမှုကိုဆင်းသွားတယ်။ မကြာသေးမီကဗြိတိန်စစ်တမ်းဆယ်ကျော်သက်များ၏ကျယ်ပြန့်အများစုဟောင်းတစ်ဦး 18 တစ်နှစ်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကျော်တက်ကြီးထွားလာကြောင့်သူတို့အပေါ်မှာရှိခဲ့ပါတယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမြင်လျှင်ဆိုသည့်အတိုင်းသူတို့ရဲ့အမြင်ကသူတို့အတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံထားပါသည်ဒါ porn, အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်စောင့်ကြည့်ယုံကြည်သောပြသခဲ့သည်။
သငျသညျ porn ED ဖြစ်ပေါ်စေနိုငျသောအငြင်းအခုံပယ်ချဖို့ကိုကြည့်တဲ့သူတွေကို sexologists မှအဘယ်သို့ပြောသလဲ?
ကောင်းပြီ, သူတို့မှားပါပဲ။ ထင်ရှားတဲ့ဆီးရောဂါပါရဂူကအကြောင်းဆောင်းပါးများရေးသားဖို့စတင်နေကြသည်။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်ကျနော်တို့နှစ်ဦးကိုဦးနှောက်ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကနေလေ့လာမှုများနှင့်မက်စ် Planck အင်စတီကျုကနေတစျခုရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါကင်းဘရစ်တဦးတည်းမူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သော ED နှင့်လိင်စိတ်ဆုံးရှုံးမှုအဖြစ်ကိစ္စများမှသည်ခံစားခဲ့ရသူတွေကိုဘာသာရပ်များ၏ 60 ရာခိုင်နှုန်းခန့်နှင့်အတူပေါ်ပေါက်သောဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို၏တူညီသောမျိုးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဂျာမန်လေ့လာမှုအကျိုးကိုဆားကစ်၏ပထမဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနာရီတစ်ပါတ်နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏နှစ်ပေါင်းဆက်နွယ်နေကြောင်း။ သူတို့က porn စောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေကိုအမှန်တကယ်လျော့နည်းမီးခိုးရောင်ကိစ္စရှိသည်အကြံပြုခြင်းတစ်ဦးဆက်စပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ထို့အပြင်နှစ်ပေါင်း porn စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုအကျိုးကိုဆားကစ်၏လျော့နည်း activation ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ကောက်ချက်ကပိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုမီးခိုးရောင်အမှု၌ကျဆင်းခြင်းနှင့်လျော့နည်းလိင်စိတ်နိုးထဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို Non-စွဲခဲ့ကြသည်။ အတော်များများက sexologists ကြောင်း porn "စွဲ" (သူတို့ပင်စွဲလမ်းအဖြစ်ကရည်ညွှန်းပါဘူး) သင်တစ်နည်းနည်းနဲ့နှင့်အတူမွေးဖွားလာသည့်တစ်ဦးမြင့်မားသောလိင်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပွားပါသည်။ တောင်းဆို သို့သော်ဤလေ့လာမှုများကြောင့်တန်ပြန်နှင့်မိုးသည်းထန်စွာ porn အသုံးပြုသူများသည်ထိုကဲ့သို့သော ED အဖြစ်, အလှည့်အတွက်ပြဿနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒရှိကြောင်းပြသ။ ဒီတော့သိပ္ပံကြောင်းဒဏ္ဍာရီဆန့်ကျင်တတ်၏။
လိင်မှုဆိုင်ရာပြconditioningနာနှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏နိဂုံးတွင်ပညာရေးပိုမိုလိုအပ်ကြောင်းသင်ပြောဆိုသည်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုကြည့်ချင်တဲ့လူတွေကိုပညာရေးကတကယ်ပဲတားဆီးမှာလား။
က porn ကိုစောင့်ကြည့်မှလူများကိုရပ်တန့်ကြမည်နည်း အမှတ်သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ဖြစ်ပေါ်နောက်ဆုံးမှာသမျှသောဤဖိုရမ်များပေါ်တက်ပြသောယောက်ျားတွေအတော်များများ porn အသုံးပြုမှုကိုသူတို့ထိုကဲ့သို့သောပြင်းထန် ED အဖြစ်တီထွင်ခဲ့သောပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးခဲ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဤလူငယ်မျိုးဆက်ပြောရလျှင်အဖြစ် porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေမြင်သည်။ သူတို့ကတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသည်ကောင်းနှင့်ဒါကြောင့်သူတို့ကြောင်းကို porn သည်ကောင်းဆိုလိုရမယ်ယူဆကြောင်းဟုဆိုကာဆောင်းပါးများကိုဖတ်ပါ။ သူတို့ connection ကိုအောင်ဘယ်တော့မှမ။ ဒါကြောင့်အကောင်းပါလိမ့်မယ်သောကွန်နက်ရှင်ကြောင့်ပညာရေးရှိခဲ့သည်လျှင်။ အဘယ်အရာကိုအဖြစ်ကောင်းစွာပျောက်ဆုံးရဲ့ sexologists porn နှင့်မျိုးပွားနိုင်ရန်အတွက် rewiring ၏လုပ်ငန်းစဉ်ခြင်းကိုသည်းခံသောဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်အကြားဆက်သွယ်မှုလုပ်ဘူးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ တစ်ဦးကအလွန်အမင်းပျော့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက် dopamine အများကြီးပိုမိုမြင့်မားအပွောငျးအလဲရှိပြီးထိုသူတို့အဘို့ပိုကြီးတဲ့ဘတ်ဇ်ဖန်တီးပေးသောစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်အသစ်အဆန်း, ရှာကြံနေပါတယ်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်“ rebooting” ဆိုတဲ့စိတ်ကူးကိုသင်ဆွေးနွေးပါတယ်။ ဒီဟာဘယ်လောက်ထိရောက်မှုရှိသလဲ။ သင်၏ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုရပ်တန့်ရန်လွယ်ကူပါသလား။
ပြန်ဖွင့်အားလုံးအတုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖယ်ရှားကိုရည်ညွှန်းသည်။ ထိုကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်၏ ED နှင့်ဆုံးရှုံးမှုအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောတွန်းအားရှိပါတယ်။ တချို့ကယောက်ျားတွေနဲ့အခြားအကြောင်းပြချက်များပြုလုပ်ရန်လုပ်နေတာ။ သူတို့ကဖိုရမ်များတွင်မိတ်ဆွေများဖြတ်ခြင်းနှင့် ပို. လှုံ့ဆျောမှု, ယုံကြည်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်ရေးနေကြသည်ကိုသတိပြုမိ။ ဒီတော့ဒီယောက်ျားတွေသူတို့ Reboot လုပ်သွားကြသည်ခံစားရသည့်အခါတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောဘာရိုမီတာရှိသည်။ မဂ္ဂဇင်းများမှတဆင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးကြီးပြင်းတဲ့သူ 40 မှ 50 အကြားအသက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေခံစားနေရပြီးယောက်ျားတွေယခု Tube က်ဘ်ဆိုက်များမှ switched ဘဲလျက် ED ဖွံ့ဖြိုးဆဲနေကြသည်။ Young ကယောက်ျားတွေမကြာခဏအဟောင်းတွေယောက်ျားတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် reboot လုပ်ဖို့အများကြီးပိုရှည်ထားဖို့လိုပါမယ်။ အဟောင်းတွေယောက်ျားတွေရှစ် 12 ဖို့ရက်သတ္တပတ် ယူ. ထိုနောက်မှဒဏ်ငွေနိုင်ပါတယ်။ 20 မှအသက် 24 - - ဤငယ်ရွယ်ယောက်ျားတွေအချို့သည်သို့သော်အပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူဖို့နှစ်နှစ်တက်ယူပါ။ ဤရွေ့ကားယောက်ျားတွေကျန်းမာရေးနှင့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဟာသူတို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးမှာဖြစ်ကြောင်းနှင့်သူတို့တစ်တွေအများကြီးပိုရှည်ယူပါ။ ဦးနှောက်ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်ပျော့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အခါဒီမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။
သောမိန်းမတို့ကိုကူး porn စွဲလွှဲပြောင်းထံမှယောက်ျားတွေအတွေ့အကြုံကိုကိစ္စရပ်များပါသလား
ယောက်ျားတွေပုံမှန်အားဖြင့် ပို. မကြာခဏ porn ကိုအသုံးပြုပါ။ ထိုကဲ့သို့သော NoFap အဖြစ်ဖိုရမ်များအပေါ်လူမျိုး၏ username များမှတဆင့်စက်ဘီးခြင်းအားဖြင့်, အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်ရှာတွေ့အမျိုးသမီးတွေမကြာခဏရိုးရှင်းစွာသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်များကမထွက်ရကြဘူးဆိုတာပါပဲ။ ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အချောမနှင့်သူတို့စွဲခဲ့ကြသည်တစ်ခုအော်ဂဇင်ရှိသည်ဖို့ porn လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေအလားတူပြဿနာများတွေ့ကြုံခံစားလုပ်ပါ။ အဆိုပါခြားနားချက်သို့သော်ယောက်ျားကသူတို့လိင်တံသောဘာရိုမီတာ, ရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ အမြိုးသမီးမြားကိုမကျင့်။ ဒါကြောင့်များစွာသောမိန်းမ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းမှဒီပြဿနာတွေကိုသက်ဆိုင်သောမဟုတ်တက်မပေါက်ပါဘူး။
ဤစာစောင်၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးနှင့်အတူသငျသညျအကြှနျုပျတို့က porn ဦးနှောက်အပေါ်ရှိပါတယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်အသိပညာမှကြွလာသောအခါမှာယခုတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာဇာတ်စင်ခံစားရသလဲ
လူ့ ဦး နှောက်အပေါ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာရာ၌ကြီးမားသောကွဲပြားမှုနှင့်အမှန်တကယ်ရန်လိုမုန်းတီးမှုများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးသည်မှာအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်များ၏အလုပ်ကြောင့်ဖြစ်သောစွဲလမ်းမှုသည်လေ့လာမှုအရှိဆုံးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပေါ်သည့်မော်လီကျူးနှင့်မျိုးရိုးဗီဇအဆင့်အထိတိရိစ္ဆာန်များကိုလွန်ခဲ့သောအနှစ်သုံးဆယ်ကသွေးဆောင်ခဲ့သည်။ ပြီးတော့အဲဒါကိုလူတွေထဲမှာတွေ့ရတဲ့စွဲလမ်းမှုအမျိုးအစားများစွာနဲ့ကျွန်တော်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့တယ်။ ဒီတော့ကြီးမားတဲ့သက်သေအထောက်အထားတစ်ခုရှိပါတယ်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်သင့်တွင် ဦး နှောက်၏ယန္တရားများကိုလေ့လာခြင်းနှင့်အဓိကအားဖြင့်မေးခွန်းလွှာများပြုလုပ်သောလူမှုဗေဒပညာရှင်များသည်လိင်ဆိုင်ရာပညာရှင်များအဖွဲ့များရှိသည်။ သူတို့မှာညစ်ညမ်းဆေးစွဲတာကိုအသိအမှတ်မပြုချင်တဲ့ပုံစံရှိတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညစ်ညမ်းရုပ်အသုံးပြုမှုကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေမယ်လို့ပြောရင်မင်းကိုလိင်အပျက်သဘောလို့မှတ်ယူလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်လိင်နှင့်ဆက်နွှယ်သောအရှက်ကွဲခြင်းကိုမလိုလားကြပါ။ သဘောတရားအရဒီလောက်အတိုင်းအတာအထိအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့သတိမထားမိကြတာကတော့အခုဆိုရင်ညစ်ညမ်းရုပ်ဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရဆိုးရွားလာပြီး၊
ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏တည်ရှိမှုပေါ်တွင်သင်၏အမြင်ရှိသော "ကောင်းသော porn" ဆံ့နှင့် "မကောင်းတဲ့" porn အဖြစ်ဖော်ပြထားဘာထွက် filter သောကဘာလဲ?
ဒါဟာတကယ်ငါ့ကိုနှောင့်အယှက်တစ်ခုလမ်းကြောင်းသစ်ပါပဲ။ ဒါဟာထိုကဲ့သို့သောရှင်းရှင်းလင်းလင်းလိုင်းရှိပါတယ်လျှင်အဖြစ်လူတွေက "ကောင်းသော" porn နှင့် "မကောင်းတဲ့" porn အကြားခြားနားချက်သင်ပေးဖို့ကြိုးစားပါတယ်တဲ့လမ်းကြောင်းသစ်ပါပဲ။ ဒါကစိတ်ကူးကဲ့သို့သောဝက်ဘ်ဆိုက်များအားဖြင့်န့ ်. နေသည် makelovenotporn.com နှင့်သင်အဘို့ပေးဆောင်နှင့်သင်တန်းအဘယ်သူမျှမငယ်ရွယ်သူတစ်ဦးအစဉ်အဆက် porn များအတွက်ပေးဆောင်သွားကြောင်း မှလွဲ. အဆင်ပြေပါသည်။ သို့သော်ကျော်လွန်အချို့ 15 နှစ်အရွယ်ဆိပြောမယ့်သောစိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ် "အိုး, ငါသည်ဤ website ကိုကောင်းသော porn ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုဤ website တွင်ဆက်နေပါလိမ့်မယ်သည်ဟုပြောဆိုခဲ့ကြောင်းခဲ့ပါတယ်။ " အခုကြောင်းရယ်စရာပါပဲ။ သောကုန်စုံစတိုးဆိုင်တစ်ခု 15 နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုယူပြီးနှင့် "သင်ချင်သမျှကိုဝယ်ရုံကောင်းသောအစာကိုဝယ်" ဟုတူ၏။ သူတို့ကသွားပါနှင့်ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းကိုဝယ်ခြင်းငှါမသွားပါတယ်။
ကြောင်းဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုင်ကြောင့်တူညီတဲ့လက္ခဏာသက်သေအားဖြင့်သူတို့က grossest နှင့် strangest ပစ္စည်းပစ္စယပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ခြင်း start သွားနေကြသည်။ ဒါကြောင့်အလုပ်မလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးသင်တန်းဒါ။ သို့သော်ထိပ်ပေါ်တွင် "မကောင်းတဲ့" porn အဖြစ်ရေတွက်ဘာလဲ? က bdsm, အမျိုးသမီးလွှမ်းမိုးမှုကိုသို့မဟုတ်စအိုလား? ဒါကအဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှငြင်းခုံပါပဲ။ ဒါဟာဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်ဘယ်တော့မှနိုင်ပြီးဒါဟာအခြေခံပြဿနာဖြေရှင်းမပေးပါဘူး။ ဘယ်လူပျိုတို့နှင့်မိန်းမ, မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်နိုးထလေ့ကျင့်ကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်အသစ်အဆန်းနေကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒါဟာတကယ် 2014 အတွက်ခြားနားချက်ကိုပေးပို့သည့်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
အင်တာဗျူး သတိပေးချက်: ထွက်လာပါတယ်ဓာတ်ပုံကို